UMary Sharpe kwi-Press Pre-TRF - I-Foundation Reward Foundation
Ikhaya UMary Sharpe kwi-Press Pre-TRF
Uluvo lukaMary Sharpe lolunye uhlobo lwesiseko sokwenza uphando lwezenzululwazi ngothando lwesondo lufikeleleke esidlangalaleni okokuqala ngo-2006. I-Intanethi yayiqala ukufumana amandla kwaye abafundi babekufumanisa kunzima ukumelana nokuphazamiseka. Ukusasaza iphonografi kwafumaneka 'kwitephu' ukusuka kwi-2007 ukubheka phambili. UMary noogxa bakhe baqala ukubeka iliso kuphuhliso kunye nemicimbi enxulumene nezempilo, ubudlelwane kunye nolwaphulo-mthetho kule minyaka ilandelayo. Kwakucacile ukuba uluntu ngokubanzi, abachaphazeli kunye nabenzi bezigqibo bafuna ukufikelela ngokulula kwisayensi eqala ukuvela malunga nefuthe le-intanethi kwindlela esiziphatha ngayo nakwiinjongo zobomi.
UMary Sharpe waqala ukusebenza kunye neempembelelo zoononografi kwimibono yothando iminyaka emininzi ngaphambi kokuba iSiseko soMvuzo sisungulwe njengesisa saseScotland.
Kule khasi sitshisa kwi-archives ukunika ingqiqo ekucingeni kwangaphambili okukhokelela kuMariya ukuphuhlisa iSiseko soMvuzo.
Kwiinyanga ezizayo siya kufaka izinto ezininzi zokuqala ukubonisa uhambo lwethu.
Ukufumana imvelaphi eyongezelelweyo kuMariya, khangela yakhe imbali Apha.
Imfazwe ngenzondo kunye nokulutha 'kufuneka iqale esikolweni'
Inqaku ngu-Hamish Macdonell, nge-11 kaJuni ngo-2011.
Amawele ebetha ihlelo kunye nokulutha kunxulumana ngokusondeleyo kwaye kufuneka kuchazwe kubantwana abancinci ukuya kwishumi, ngokutsho kwengcali yehlabathi kwisisombululo sempixwano.
Abaphathiswa banike ulwazelelo ngoncedo lo mnxeba, uvela kuMary Sharpe, igqwetha lehlabathi, ukuze abafundi bezikolo eScotland bafundiswe ngobungozi benkonzo yeqela, nangomngcipheko wokusela kunye neziyobisi. Uyakholelwa ukuba ezi zibini zinxulumene.
Umnumzana Sharpe usandula ukubuyela eScotland emva kophando malunga nokuguqulwa kwamaSilamsi aselula eNato. Ufuna ukuseka iziko lokusombulula ungquzulwano e-Edinburgh, anethemba lokuba, uya kuba nakho ukunceda umlo ngokulwa nehlelo.
Ukholelwa ekubeni ihlelo eScotland alinakuthanani iingxaki zesizwe ngeziyobisi-ngakumbi notywala - kwaye uyavuma ukuba zombini iziyobisi kunye nokusonjululwa kwembambano kufuneka zibe kwikharityhulamu ukuba iScotland ibe lilizwe elinyamezelayo.
Isithethi sika-Mphathiswa wokuqala, oza kupapasha iBhili yokulwa nehlelo kwiveki ezayo, wathi uNks. Sharpe wabonakala enokuninzi ukunika le mpikiswano. “Singakulangazelela kakhulu ukuqhubela phambili ukuze ubone ukuba uza kuthini,” utshilo.
UAlex Salmond wenze idabi lokulwa nehlelo ukuba yinto ephambili kulawulo olutsha kwaye icandelo labo lomthetho iya kuba yi-anti-sectarianism Bill, ekufuneka ibekwe phambi kwepalamente kamva kule veki.
Lo mthetho usayilwayo kulindeleke ukuba wonyuse ixesha lokuvalelwa entolongweni ngenxa yezenzo zentiyo zamanye amaqela ukusuka kwiinyanga ezintandathu ukuya kwiminyaka emihlanu, zenze okugwenxa kwi-intanethi kubhalwe kwintiyo yenkolo kunye nokubonisa okungekho mthethweni kweqela kwimidlalo yebhola.
Umnumzana Salmond wavula ihlelo emva kokukhula kwenqanaba leengxaki zase-Old Firm kwisizini ephelileyo emva kokuba kuthunyelwe iibhombu kuNeil Lennon, umphathi weCeltic, kunye nababini ababenomdla ophezulu wale klabhu.
UMphathiswa wokuQala udibanise ingxaki yaseScotland yotywala nehlelo xa wachaza izinto eziphambili kulawulo olutsha kwiPalamente yaseScotland kwinyanga ephelileyo. Umnumzana Salmond uthe: "Inxalenye yamaSatata ahamba kunye, ubuncinci inxenye yohlaselo lwethu lokhuseleko nokonwaba - inkcubeko ye-booze."
Umnumzana Sharpe uthe uyonwabele into yokuba uMnu Salmond efumene ukubaluleka kokunxibelelanisa phakathi kweqela leziyobisi nehlelo kwiinzame zakhe zokujongana nalo mba kwaye wathi unethemba lokuba unyulo lolawulo lwe-SNP luya kunika ithuba lokuthatha lo msebenzi kude. . “Ndichulumancile luguquguquko lwemozulu eScotland kunye nokuzimisela kwethu apha ukuba ilizwe lijongane needemon zalo,” utshilo.
U-Sharpe ubanga ukuba iScotland ineengxaki ezinobungozi zotywala, i-nicotine, i-Intanethi, iziyobisi, ukungcakaza kunye nokutya okungekho sembizeni - konke oku, utshilo, ebencede ekuqhubeni ilizwe liphezulu kwiitafile zelizwe jikelele zokugula, intlupheko kunye ukutyeba kakhulu. “IScotland inengxaki ethile. Siphila kwinkcubeko enetyhefu, utshilo.
Wongeze ukuba ekuphela kwendlela ezingunobangela zale ngxaki zinokuthi zisonjululwe kakuhle yayikukutshintsha ikharityhulamu yesikolo kwaye kufundiswe abantwana ngesiyobisi kunye nehlelo ukususela kwiminyaka elishumi. “Kufuneka singene ezikolweni.
“Kufuneka sifundise ootitshala ukuze baxelele abantwana ukuba kwenzeka ntoni kwaye banokuba nefuthe kubazali babo,” utshilo.
Wongeza wathi: “Ndikhulele kwiNtshona yeScotland. Le nto ndiyibonile xa ndandisakhula kwaye nangoku isekhona. ”
U-Ms Sharpe wathi nangona ugonyamelo lwasekhaya luthanda ukuya emva kwemidlalo ye-Old Firm, ihlelo ngokwalo yayingeyiyo unobangela; endaweni yoko yayiyimbonakaliso yezinye iingxaki ezinkulu zentlalo, kubandakanya notywala. Kwaye wongeze: “Umceli mngeni kwabo benzi bemigaqo-nkqubo asikokufumana iintliziyo neengqondo zolutsha lwethu kodwa kukuhlangula. Oku kungenziwa kuphela ngemfundo. "